Hlola iBerlin, eJalimane - World Tourism Portal
Hlola iBerlin, eJalimane
Ongakubona futhi ukwenze eBerlin, eJalimane.
Okufanele ukwenze eBerlin, eJalimane
Uhambo losuku kusuka eBerlin
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eBerlin, eJalimane
Bukela ividiyo ngeBerlin, eJalimane
IBerlin inhloko-dolobha ye Germany nesinye sezifundazwe ze-16 (i-Länder) zeFederal Republic of Germany. Hlola iBerlin, idolobha elikhulu kunawo wonke eJalimane elinabantu abayizigidi ezingama-4.5 ngaphakathi kwendawo yedolobha labo kanye nesigidi se-3.5 kusuka emazweni angaphezu kwe-190 ngaphakathi kwemingcele yedolobha.
IBerlin yaziwa kakhulu ngezinhlangano zayo zomlando njengenhloko-dolobha yaseJalimane, ubumbano lwamazwe omhlaba kanye nokubekezelelana, impilo yasebusuku ebabazekayo, amathofi amaningi, amakilabhu, imigoqo, ubuciko basemgwaqweni, kanye neminyuziyamu eminingi, izigodlo, nezinye izingosi zomlando. Ukwakhiwa kweBerlin kuhluke kakhulu. Yize alimala kabi eminyakeni yokugcina yeMpi Yezwe II futhi ehlukaniswe phakathi neMpi Yomshoshaphansi, iBerlin izisungule kabusha kakhulu, ikakhulukazi nge-muungano yokuhlanganisa ngemuva kokuwa kodonga lwaseBerlin e1989.
Manje kusenokwenzeka ukubona abamele izinkathi eziningi zomlando ngesikhathi esifushane phakathi enkabeni yedolobha, ukusuka ezakhiweni ezimbalwa zasendulo eziseduzane nase-Alexanderplatz, kuya ezingilazini zanamuhla nezingilazi zensimbi ePotsdamer Platz. Ngenxa yomlando waso onesiphithiphithi, iBerlin isalokhu ingumuzi onezindawo eziningi ezihlukanisayo. IBrandenburger Tor iwuphawu lokwehlukanisa phakathi nempi yezwe, manje okukhombisa ukuhlangana kweJalimane. Yakhiwa ngemuva kwe-Acropolis ku Athens futhi yaqedwa e-1799 njengesango ledolobha lasebukhosini.
Isikhungo somlando saseBerlin, isizinda se-East Berlin yangaphambili, kanye nesikhungo sedolobha esivelayo. Amakhekhe, izindawo zokudlela, iminyuziyamu, imidwebo kanye namaqembu kuningi esifundeni sonke, kanye neziza eziningi zomlando ezithakazelayo.
ICity West (iCharlottenburg, iWilmersdorf, iSchöneberg, iTiergarten, iMoabit)
I-Ku'Damm (emfushane ngeKurfürstendamm), kanye neTauentzienstraße, okungenye yezitaladi ezinkulu zokuthenga ezazikulo West Berlin yangaphambili, ikakhulukazi izimpahla zokunethezeka. Izindawo eziningi zokudlela ezinhle namahhotela akhona nasemigwaqweni eseceleni. Lesi sifunda siqukethe iCharlottenburg Palace, Kulturforum, Tiergarten kanye ne-Olimpiki Stadium. ISchöneberg imvamisa iyindawo ethokomele yama-hippies asebekhulile, imindeni emisha nabantu be-LGBT.
I-East Central (iFiedrichshain, Kreuzberg, Prenzlauer Berg)
Ihlotshaniswa nesiko lentsha yephiko lasobunxele, abaculi kanye nabafuduki baseTurkey, lesi sifunda sihle kakhulu kunabaningi, sigcwele amathofi amaningi, imigoqo, amakilabhu nezitolo ezihamba phambili, kodwa futhi neminye iminyuziyamu eKreuzberg eduze komngcele weMitte. Lezi zifunda zenziwa ubumbano njengoba zithandwa ngabafundi, abaculi nabasebenza kwezemithombo yezindaba ngokufanayo.
Enyakatho (Spandau, Tegel, Reinickendorf, Pankow, Weißensee, Gesundbrunnen, Umshado)
ISpandau neReinickendorf ngamadolobha amahle amadala azizwa ephakeme kunedolobha elingaphakathi. IPankow yake yafana nohulumeni wase-East Germany, kanti futhi abaholi be-SED ababekhona bahlala besekhona.
IMpumalanga (Lichtenberg, Hohenschönhausen, Marzahn, Hellersdorf)
Umnyuziyamu osendaweni yokunikela kwe-1945 kwi-Soviet Army uyathakazelisa, kanye nejele langaphambili le-Stasi, ukuvakasha okubalulekile kunoma ngubani othanda umlando wase-East Germany. IMarzahn-Hellersdorf inedumela elingafanele ngokuphelele ukuba yiqoqo elikhulu lezindawo ezivulekileyo eziphakemeyo zokwakha amafulethi, ngoba iqukethe "Izingadi Zomhlaba", ipaki elikhulu lapho kuhlolwa khona izitayela ezahlukene zobuhlanga.
ENingizimu (Steglitz, Zehlendorf, Tempelhof, Neukölln, Treptow, Köpenick)
ISouth yisikhwama esixubile sezindawo ezahlukene. IZehlendorf ingesinye sezifunda eziluhlaza kakhulu futhi ezicebile eBerlin, kanti iNeukölln ingesinye sezimpi zedolobha. Izindawo zokubhukuda zamahlathi zikaKöpenick ezungeze ichibi elikhulu kunazo zonke laseBerlin, iMüggelsee nedolobha elihle laseKöpenick ngokwalo zicela ukutholakala ngamabhayisekili futhi kusetshenziswa iS-Bahn.
Isisekelo saseBerlin sasinamasiko amaningi kakhulu. Indawo ezungezile yayigcwele izizwe zamaJalimane amaSwabian namaBurundi, kanye namaSlavic Wiend ezikhathini zangaphambi kobuKristu, kanti amaWind aye anamathele. Izizukulwane zabo zesimanje ziyidlanzana labantu abakhuluma izilimi zaseSorbia ezihlala emadolobheni aseningizimu-mpumalanga yeBerlin eduze noMfula iSpree.
IBerlin yidolobha elincane elilinganiswa namazinga aseYurophu, kusukela ngekhulu leshumi nantathu, futhi ibilokhu inedumela njengendawo egcwele abantu abavela kwenye indawo. Kungabonakala kunzima ukuthola umuntu ozelwe futhi akhulele lapha! Lokhu kuyingxenye yothando lwaseBerlin: alusoze lwabhajwa luhlaka.
Yebo isiJalimane siwulimi oluphambili eBerlin kodwa ungaluthola kalula ulwazi ngesiNgisi kwesinye isikhathi nangesiFulentshi.
Iningi labantu elingaphansi kwe-40 eBerlin liyakwazi ukukhuluma isiNgisi ngamazinga ahlukahlukayo okushelelayo, kepha kungahle kungakhulunywa kabanzi njengoba ungalindela, ngakho-ke imishwana embalwa emqoka yamaJalimane kufanelekile ukuba nayo, ikakhulukazi ezindaweni ezingaphansi kwezindawo zokuvakasha kanye nezindawo ezivakashi ezimbalwa. IsiFulentshi nesiRussia eziyisisekelo kukhulunywa ngokwengxenye ngoba isiFulentshi eNtshonalanga Berlin naseRussia e-East Berlin babefundiswa ezikoleni.
“Imikhiqizo” ebaluleke kakhulu ekhiqizwe eBerlin yizo zombili izikhungo ezixhaswe ngemali yizinkampani ngocwaningo. Lolo cwaningo luthunyelwa ngaphandle komhlaba jikelele. Abasebenzi baseJalimane basebenza kahle kakhulu kepha beza ngezindleko eziphakeme. Izinyunyana eziqinile zokuhweba, ukuphela kwezimali zokuxhasana kwangaphambi kokuhlangana kweWest Berlin kanye nemvelo yokulawula eminyene yaseJalimane kwaphoqa imboni ukuthi igxilise kakhulu kukhwalithi ephezulu nemikhiqizo ebizayo.
IBerlin iyi - okungenani ezingxenyeni eziningi - idolobha elihle, ngakho-ke vumela isikhathi esanele sokuthola ukubona. Imephu enhle inconyelwa kakhulu. Ngenkathi uhlelo lokuthuthwa komphakathi luhamba kahle, lungadida izivakashi, ngenxa yokuntuleka kwezimpawu eziqondisayo kwezinye zeziteshi ezinkulu, ngakho-ke imephu yokuhamba enhle nayo ibalulekile.
IBerlin yidolobha elikhulu. Ungasebenzisa ibhasi elihle kakhulu, ibhilamu, isitimela kanye nezinsizakalo ezingaphansi komhlaba ukuze uthole ukuzungeza. Izinsizakusebenza zamatekisi nazo kulula ukuzisebenzisa futhi zibiza kancane kunakwamanye amadolobha amakhulu aseCentral Europe.
Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eBerlin, eJalimane
iminyuziyamu - imidwebo yezobuciko - amasonto - izimpawu zomhlaba - zoo eBerlin
.Ngokuvamile imali yi-Euro. Izitolo ngokuvamile azizemukeli amasheke wabahambi, kepha amukela amakhadi okudonswa kwemali, futhi ngokuya futhi namakhadi wesikweletu (i-Visa ne-MasterCard yamukelwa kabanzi). Amabhange ngokuvamile avulwa ukusukela ku-9 AM kuya ku-4 PM mon thru friday.
Imishini yemali yande kakhulu, nasezitolo ezinkulu zezitolo futhi kwesinye isikhathi ezitolo ezinkulu zomnyango noma ezitolo ezinkulu. Ikhadi lokudonswa kwemali laseJalimane elijwayelekile, elisebenzisa imishini yemali yamabhange amakhulu - emagatsheni asebhange ejwayelekile - livame ukubangela imali ephansi kunokusebenzisa imishini yamabhange angavamile, angafaka imishini yawo eduze kwezitolo ezincane. Bukela izaziso zezimali ezikhokhwayo, futhi, uma imali ekubonisweni ibonakala iyinqaba, kunalokho khansela ukuthengiselana, ucele abantu bendawo ukuthi bakhombise indlela eya egatsheni elilandelayo lebhange elivamile, elingakaze lihambe imizuzu emihlanu kude, njengoba imali izokwehla kakhulu. Ngedebit yangaphandle noma ikhadi lesikweletu, cishe noma yimuphi umshini wemali eBerlin uzokunikeza ukukhishwa kwemali mahhala, njengoba imali ezosebenza izosetshenziswa yibhange lakho.
Akukho mkhawulo osemthethweni emahoreni okuthenga ngoMsombuluko nangoMgqibelo. Kodwa-ke, izikhathi zokuvala zincike endaweni; izinga libonakala liyi-8PM, noma lingaba ngaphambili ezindaweni ezikude. Iningi lezitolo ezinkulu kanye cishe nazo zonke izitolo ezinkulu zivulekile ngokungeziwe kuze kube i-9 noma i-10PM ngezinsuku ezithile zeviki, imvamisa phakathi kukaLwesine noMgqibelo.
Ukuvulwa kwangeSonto ngomthetho kukhawulelwe okungenani izimpelasonto eziyishumi nambili ngonyaka, imvamisa kuhlangene nemicimbi emikhulu, kubhekwe izimemezelo ezitolo nasezindabeni zasekhaya. Ezinye izitolo ezinkulu eziseziteshini zezitimela (iHauptbahnhof, iBahnhof Zoologischer Garten, Friedrichstrariche, Innsbrucker Platz ne-Ostbahnhof) zivulwa sekwedlule isikhathi futhi nangamaSonto. Amabhisikidi amaningi nezitolo ezincane zokudla (ezibizwa ngeSpätkauf) zivulwa ebusuku futhi ngamaSonto ezindaweni ezimatasa (ikakhulukazi iPrenzlauer Berg, Kreuzberg kanye neFriedrichshain). Futhi amabhikawozi eThailand avulwa emalangeni.
Izindawo ezinkulu zokuthenga yilezi:
I-Ku'Damm nokwandiswa kwayo, iTauentzienstraene ihlala iyimigwaqo ephambili yezitolo enezitolo ezinkulu zemikhiqizo eminingi yaphesheya. I-KaDeWe (i-Kaufhaus Des Westens) e-Wittenbergplatz iyindawo yokuvakasha izivakashi ngokwayo, hhayi okuncane umnyango omningi wokudla ophansi we-6th. Kuyaziwa ukuthi iyisitolo esikhulu somnyango e-Continental Europe futhi sisaleli thayela elidala lomhlaba, elinabasebenzi abasizayo nabanomusa kakhulu.
IFryrichstraße iyisitolo esithengwa phezulu sasesitolo sangaphambili e-East Berlin eyayine-Galeries Lafayette kanye namanye ama-Quartiers (i-204 kuya ku-207) njengezindawo eziphambili ezizothokozelwa abathengi abacebile. Isitolo esivuselelwe somnyango saseGaleria Kaufhof e-Alexanderplatz naso sikufanele ukuvakashelwa.
Eminye imigwaqo yezitolo ezindaweni ezingaphansi kwayo ifaka iSchloss-strasse (Steglitz), iWilmersdorfer Strasse (Charlottenburg), iSchönhauser Allee (Prenzlauer Berg), Carl-Schurz-Strasse (Spandau) neKarl-Marx-Strasse (Neukölln).
Izitolo ezinkulu zokuthenga ezinkulu ezinezitolo ezingaphezu kwe-100, inkantolo yokudla iyisibonelo ama-Alexa (Alexanderplatz / Mitte), Potsdamer Platz Arkaden (Potsdamer Platz / Mitte), Mall of Berlin (Leipziger Platz / Mitte), Gesundbrunnen-Center (Gesundbrunnen Station / Wedding ), Gropius-Passagen (Britz), Linden-Center (Hohenschönhausen, Spandau-Arkaden (Spandau), Schloss (Schloss-strasse / Steglitz), IForum Steglitz (Schloss-strasse / Steglitz), iRing Center (Friedrichshain).
Indawo enkulu yokumaketha indawo esetshenziselwa enye indawo, kodwa isixuku esisezingeni elingcono isenyakatho yeHackescher Markt, ikakhulukazi ezungeze iHackesche Höfe. Ngokuthenga okungabizi kakhulu kepha okufashisayo kakhulu kukhona iPrenzlauer Berg, Kreuzberg neFriedrichshain enezindawo eziningi zokuqamba izitolo ezisebasha, kodwa futhi kunezitolo eziningi zokuqopha nezitolo zokudweba. Ushintsho olungaguquki lwenziwa kube nzima ukuncoma indawo, kepha indawo ezungeze isiteshi i-Eberswalder Straße, Kastanienallee ePrenzlauer Berg naseTorstrasse eMitte, ngaseBerggannannße naseOranienstraße eKreuzberg, ngaseBoxhagener Platz eFriedrichshain nase-Eisenacher Strasse ku-Schöneberg. ukuyothenga.
Yonke indawo ku Germany ngaphandle kweBerlin, ama-jam donuts aziwa njengoBerliner, kepha eBerlin, abizwa ngePfannkuchen. Lokhu kusho ukuthi “ipancake” yonke indawo, ngakho-ke uma ufuna ipancake eBerlin, kufanele ucele i-Eierkuchen. Udidekile okwamanje?
Okuphazamisayo eBerlin yi-currywurst. Ungama-bratwurst osikiwe embozwe nge-ketchup ne-curry powder. Ungabathola kulo lonke elaseBerlin ngabathengisi basemgwaqweni. Kumele uzame uma useBerlin futhi kulabo abangayidli inyama noma abathanda ukudla okunamafutha amancane futhi kuza nezinguqulo ezingenazilwane.
Enye into edumile yokudla eBerlin nguDöner. Lesi yisinkwa esicwebezelayo, esigcwele iWundlu noma inyama yenkukhu noma umthungi, isaladi nemifino, futhi ungasithola ezitimeleni eziningi ze-Turkish. I-vegan Döner edume kakhulu ibizwa nge-Vöner futhi ihanjiswa endaweni yokudlela enegama elifanayo esiteshini S-Bahn Ostkreuz. Okunye ukudla okudumile okufudukayo kufaka phakathi amasemishi akwaFalafel noMaqali (imifino ethosiwe).
NgoSepthemba i-2015 Berlin yaqanjwa njengelungelo lomnotho wezwe ngumagazini wezwe u-Saveur. Uma kucatshangelwa zonke izinketho zemifino ezindaweni zokudlela ezijwayelekile futhi ikakhulukazi inani lezindawo zokudlela zemifino kanye nezindawo zokudlela ze-vegan kuphela lesi sihloko sizwakala kufanelekile futhi sibonisa umkhondo wakamuva we-vegan kulo lonke elaseJalimane ongahambisani nezinto ezisindayo inyama-esindayo Ukudla kwaseJalimane.
Ukudla ngaphandle eBerlin akubizi kakhulu uma kuqhathaniswa namanye amadolobha aseNtshonalanga Yurophu noma amanye amadolobha aseJalimane. Idolobhana linamasiko amaningi futhi izindlela zamasiko amaningi zimelelwa lapha kwenye indawo, yize zivame ukuguqulwa ukuze zivumelane nokunambitheka kwamaJalimane.
Onke amanani kufanele afake i-VAT ngokomthetho. Izindawo zokudlela ze-upmarket kuphela ezingacela ukwengezwa okwengeziwe kwensiza. Qaphela ukuthi kungcono ukubuza ukuthi amakhadi wesikweletu amukelwa ngaphambi kokuhlala phansi - akuyona into evamile ukwamukela amakhadi wesikweletu nemali evame ukuthandwa. Okunokwenzeka ukuthi yamukelwe yiVisa ne-Mastercard; wonke amanye amakhadi azokwamukelwa kwezinye izindawo zokudlela ze-upmarket.
Enye yezindawo eziyinhloko zabavakashi zokudlela ngaphandle yiHackescher Markt / Oranienburger Straße. Le ndawo isishintshe kakhulu phakathi neminyaka: lapho igcwele squats hhayi imishayo nezindawo zokudlela ezingekho emthethweni ngokuphelele, yayinomlingiswa wangempela. Iyakhiwa ngokushesha futhi ididiyelwe, futhi abadwebi besikwati esidume kunazo zonke - inkampani eyayihlala ama-proto-shop mall "Tacheles" - baxoshwa kanti le ndawo ibilokhu ine-facelift. Kusekhona amagugu emigwaqweni eseceleni, noma kunjalo, i- "Assel" (Woodlouse) e-Oranienburger Straße, enikezwe ifenisha ye-DDR-era, iseyinyani futhi ikufanele ukuvakashelwa, ikakhulukazi kusihlwa sasehlobo esishisayo. I-Oranienburger Straße nayo iyindawo lapho izifebe zigcwala khona ebusuku, kepha ungagxeki kulokhu. Indawo empeleni iphephe kakhulu futhi izakhiwo ezimbalwa zokuphatha nezenkolo zitholakala lapha.
Ngokudla okushibhile futhi okuhle (ikakhulukazi okuvela eTurkey naseNingizimu Yurophu) kufanele uzame iKreuzberg neNeukölln ngobuningi babo be zokudlela zamaNdiya, pizza ne-Döner Kebab.
Kujwayelekile kakhulu ukuphuma ukuyodla isidlo sasekuseni noma i-brunch (ibhulakufesi elide nelantshi, konke ongakudla isinkwa, ngokuvamile kusuka ku-10AM kuya ku-4PM - kwesinye isikhathi kufaka ikhofi, itiye noma ujusi).
EWarschauer Straße futhi ikakhulukazi uSimon-Dach-Straße kanye naseBoxhagener Platz ungathola imigoqo eyahlukahlukene. Kujwayelekile ukuthi abantu bendawo bahlangane eWarschauer ukuze baye emgqomeni lapho. Futhi i-Ostkreuz (Eastcross) kanye neFrankfurter Street ziyindawo yomhlangano edumile. Ikakhulu ukuvakashela ezinye izindawo ("ezingaphansi- / kwesobunxele-szene") kumaphrojekthi wezindlu (abizwa ngama-squats), njenge-Supamolly eJessnerstreet (Traveplatz), Scharni38 (Scharnweberstreet) njalonjalo.
Kukhona imigoqo eminingi yase-Ireland kulo lonke idolobha, njengoba kunjalo kuwo wonke amadolobha aseYurophu. Uma uthanda imishayo yase-Ireland noma ukubuka ibhola ngesiNgisi ngeke udumazeke, kepha edolobheni elinemigoqo emisha evula kakhulu nsuku zonke kanye nobubanzi obukhulu ongakhetha kukho, uzothola ukuthi lezi basebenzisana kakhulu nabasebenzi bokwakha base-Ireland kanye namaJalimane akhangwa ngumculo wase-Ireland, ovame ukudlalwa kuwo. Uma ufuna ukuthola amanzi ompompi emgqonyeni buza i- “Leitungswasser” (uma nje uthi “amanzi” (uWasser), uzothola amanzi amaminerali.) Lokhu kuvamile uma uphuza ikhofi. Akufanele bakukhokhisele yona kepha kufanele u-oda futhi esinye isiphuzo.
AbakwaBerlin bayathanda ukuphuza ama-cocktails, futhi yiphuzu eliyinhloko lokuzijabulisa lentsha. Abantu abaningi bathanda ukuhlangana nabangane babo emgqonyeni we-cocktail ngaphambi kokujaha. I-Prenzlauer Berg (Around U-Bahnhof Eberswalder Str., Helmholtzplatz, Oderberger Straße & Kastanienallee), Kreuzberg (Bergmannstraße, Oranienstra ande kanye nendawo ezungeze iGörlitzer Park ne-U-Bahnhof Schlesisches Torz, Schplischesszz. IFryrichshain (iSimon-Dach-Straße kanye naseBoxhagener Platz) yizindawo eziphambili. Akunamabha amaningi angekho emthethweni njengoba ayekhona kuma-'90s kepha imigoqo ivulekile futhi ivaliwe ngokushesha kunokuba ukwazi ukuyigcina.
Ungathola amathofi e-inthanethi nezitolo zezingcingo nxazonke zeBerlin. Yenza ucwaningo oluncane nezitolo zezingcingo ngoba iningi linendawo egxile kakhulu emhlabeni. Imigoqo eminingi, izindawo zokudlela nezindawo zokudlela zamahhala zinikeza i-Wi-fi yamahhala izivakashi zazo.
Amaphoyisa aseBerlin anekhono futhi awekhohlakele. Ukuzama izikhulu zokufumbathisa kungahle kube nomphumela wobusuku okungenani bokuvalela imigoqo ukuze isizinda sakho sihlolwe. Amaphoyisa ngokuvamile awusizo kubavakashi. Iningi lezikhulu ziyakwazi ukukhuluma isiNgisi, ngakho-ke unganqikazi ukuya kubo uma wesaba noma ulahlekile. Inombolo yezimo eziphuthumayo ezweni lonke yi-112 yezimo eziphuthumayo nemililo, kuyilapho inamba yezimo eziphuthumayo yamaphoyisa eyi-110. Amaphoyisa aseBerlin akulungele ukuphenya ngobugebengu obuncane futhi enze amayunithi abalulekile ukuze awaphenye futhi akhona ezembatho ezisobala ezindaweni ezishisayo zezivakashi futhi, ngemvume yabaniniwo, nakwamanye amakilabhu. Ngakho-ke, ukushaya inombolo ephuthumayo yamaphoyisa uma uke waba yisisulu noma ufakazi wobugebengu obuncane ngokushesha kungasiza amaphoyisa ukulandelela abenzi bokubi, noma ukukhomba impahla ethile eyebiwe eyeyakho.
IPotsdam inhlokodolobha yezwe elibusayo laseBrandenburg, hhayi kude kangako eningizimu nentshonalanga yeBerlin, futhi yenza uhambo oluhle losuku. Ikakhulu ipaki yeSanssouci, indawo yamagugu omhlaba enezigodlo zayo ezinkulu ezidumile, ikufanele ukuvakashelwa. Izizathu zeSanssouci zikhulu (ngaphezu kwamahektha we-200, amahektha we-500). Kuthatha usuku lonke uma uvakashela zonke izakhiwo.
ISachsenhausen isendaweni engaphandle kwe-Oranienburg, indawo engaphansi komhlaba enendawo yokugcina izidumbu zamakamu okuhlushwa amaNazi enhlabathini yaseJalimane. Kukhona nesigodlo esincane enkabeni ye-Oranienburg.
Isifunda echibi laseMüritz enyakatho iyipaki yezwe enamachibi angamakhulu ambalwa.
Ngaseningizimu, Dresden yi-2.5 hrs & Leipzig imayelana namahora we-1.25 ngesitimela.
Ugu lolwandle oluhle lwaseBaltic (isib. Useom) luseduze ngokwanele ukuthatha uhambo losuku ngesitimela.
I-Spreewald isitolo esivikelekile se-UNESCO biosphere reservation. Kuhlanganisa nezindawo ezinamanzi aphansi lapho umfula iSpree ungena khona ezinkulungwaneni zemigwaqo emincane yamanzi ngokusebenzisa izihlahla namahlathi. Kuyinto enhle, eyingqayizivele yezwe ecishe ibe ihora elilodwa eningizimu yeBerlin futhi ilufanele uhambo losuku noma uhambo lwangempelasonto lokuphumula empilweni yasedolobheni ebabazekayo.
Frankfurt i-der Oder emngceleni wePoland itholakala kalula.
Hlola iBerlin, iLutherstadt Wittenberg imayelana nemizuzu engu-40 ngaseningizimu yeBerlin e-ICE. ISchlosskirche kwakuyisonto lapho uMartin Luther alengisa khona izihloko zakhe. Ngaphesheya komgwaqo lapho kukhona isikhungo sezivakashi esinemininingwane enhle. Idolobha elihle ukuvakasha futhi umuntu angalihlola kalula ngezinyawo.
Umgwaqo iRaststätte Grunewald esiteshini se-S-Bahn Nikolassee uyindawo enhle yokushaywa umoya uma ulibangise eningizimu noma entshonalanga.
Umngcele wasePoland ungenye i-90km empumalanga yeBerlin; Ngakho-ke kungathakazelisa ukwenza uhambo lokuya:
Szczecin (Stettin) ku Poland cishe amahora amabili nesigamu ngesitimela.
IPoznań (Posen) ePoland amahora amathathu ngesitimela.
Warsaw (I-Warschau) ePoland amahora ayisihlanu nesigamu ngesitimela.